Vatsigiri veZanu PF Vanovhiringidza Musangano weElectoral Ammendment Bill
Gumiguru 17, 2011
Nhengo dzeZanu PF kuMarondera, mudunhu reMashonaland East, dzavhiringidza musangano wekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri resarudzo, reElectoral Amendment Bill, uyo wange wakarongwa nekomiti yeparamende inoona nezvemutemo pamwe nenyaya dzeparamende.
Mhirizhonga iyi inonzi yatanga mushure mekunge nhengo dzebato reZanu PF dzarambidza kutaura vanhu vange vaine pfungwa dzisingawirirani nedzebato ravo.
Kunyange hazvo musangano uyu watanga murunyararo, mhirizhonga yazotanga apo patanga kutaura nhengo yeZimbabwe Election Violecnce Victims Association.
Vatsigiri vebato reZanu PF vabva vatanga kuimba, vachiita maslogan ebato ravo vachiti vange vasingazobvumira kuti vanhu vataure zvisina maturo pamusangano uyu, uyo wanga uchiitirwa kuMbuya Nehanda Hall mumusha weDombotombo.
Vange vachitungamira musangano uyu, VaInnocent Gonese veMDC T, pamwe nenhengo dzekomiti yavo kubva kuZanu PF neMDC vatadza kunyayararidza mhomho yevanhu yange ichiita nyonganyonga iyi, uye vabva vatomisa musangano uyu mushure mekuona kuti paizoita mhirizhonga inotyisa, sezvo pange pasina mapurisa.
VaGonese vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanhu vakawanda vange vauya pamusangano uyu, chinosuwisa ndechekuti pane vamwe vasingadi kunzwa pfungwa dzisingaenderani nedzavo.
VaGonese vasvora kusavepo kwemapurisa pamusangano uyu zvisinei nekuti vakuru veparamende vainge vanyorera mapurisa vachi kumbira kuti achengetedze runyararo pamusangano uyu nemimwe ichatevera.
Mukuru wesangano reSouthern African Parliamentary Support Trust, VaJohn Makamure, avo vaona zvaitika pamusangano uyu, vati zvakakosha kuti paramende iregwe ichiita misangano yayo pasina mhirizhonga.
Vati kuita uku hakufaniri kudzorera paramende kumashure uye ino fanira kuenderera mberi nebasa rairi kuita rakanaka, zvisinei nekuti pane nhubu dziri kuda kuvhiringa chirongwa ichi.
Sachigaro wekomiti yeparamende iyi, VaDouglas Mwonzora, avo vazosvika paMbuya Nehanda Hall vanhu vatoparara, vati havana kukatyamara nezvaitika, vachiti gurukota rezvemutemo, VaPatrick Chinamasa vanove nhengo yeZanu PF, vakatobuda pachena kuti vainge vasingadi kuti misangano iyi iitwe.
VaMwonzora vayambira veruzhinji kuti vasiyane nezvekuvhiringa misangano iyi asi kuti vape pfungwa dzavo kuti dzigovewo mumutemo wesarudzo.
Aka hakasi ketutanga vatsigiri veZanu PF vachivhiringa misangano yekomiti iyi. Muna Chikunguru nhengo dzeZanu PF dzakavhiringa misangano yekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pemutemo wekodzero dzevanhu kuMasvingo, Chinyoyi nekwaMutare.
MuHarare vatsigiri veZanu PF vakatorova nhengo dzekomiti iyi pamwe nevatori venhau, uye kusvika pari zvino hapana ati asungwa nenyaya iyi.